ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ - ၂၀
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Scot Marciel အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံအရပ်ဖက်/စစ်ဖက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ဆံရေး အခြေအနေများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အင်ဒို-ပစိဖိတ် ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရပ်တည်ချက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ တပ်မတော်က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် အမေရိကန်က ကြိုဆိုထောက်ခံမှုနှင့် ထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာပြီး နောက်ပိုင်း တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှုနှင့် တိုးတက် မှုအခြေအနေများ၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် IDP Campများမှ နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများအား မူလနေရာသို့ ပြန်လည် နေထိုင်နိုင်ရေး အစိုးရနှင့် တပ်မတော်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ဒေသဖြစ်စဉ် များနှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ အပေါ် တပ်မတော်မှ အပြည့်အ၀ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ဒေသတွင် ARSA နှင့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၏ ပြည်နယ်အတွင်း ဖျက်ဆီး၊ နှောင့်ယှက်မှုအပေါ် ပြည်သူ လူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များအား တပ်မတော်မှစောင့်ရှောက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရရှိမှု အခြေအနေများ၊ ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေး စာချုပ်(CWC)အား မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်များ အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်(ကြည်း)နှင့်အတူ စစ်ဥပဒေချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col. Craig Tippins နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးစိုးဝငျး မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျနိုငျငံသံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Scot Marciel အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-အမရေိကနျ နှဈနိုငျငံအရပျဖကျ/စဈဖကျနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု ဆကျဆံရေး အခွအေနမြေား၊ အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ အငျဒို-ပစိဖိတျ ဆိုငျရာရညျရှယျခကျြနှငျ့ ရပျတညျခကျြဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာ ၂၁ ရကျနေ့ တပျမတျောက ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးနှငျ့ ထာဝရ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ထုတျပွနျခကျြအပျေါ အမရေိကနျက ကွိုဆိုထောကျခံမှုနှငျ့ ထုတျပွနျခကျြကွညောပွီး နောကျပိုငျး တိုငျရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးဆောငျရှကျမှုနှငျ့ တိုးတကျ မှုအခွအေနမြေား၊ ကခငျြပွညျနယျတှငျ IDP Campမြားမှ နရေပျစှနျ့ခှာပွညျသူမြားအား မူလနရောသို့ ပွနျလညျ နထေိုငျနိုငျရေး အစိုးရနှငျ့ တပျမတျောမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျဒသေဖွဈစဉျ မြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ လှတျလပျသောစုံစမျးစဈဆေးရေးကျောမရှငျ၏ ဆောငျရှကျခကျြမြား အပျေါ တပျမတျောမှ အပွညျ့အဝပူးပေါငျးကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျဒသေတှငျ ARSA နှငျ့ AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူမြား၏ ပွညျနယျအတှငျး ဖကျြဆီး၊ နှောငျ့ယှကျမှုအပျေါ ပွညျသူ လူထု၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျမြားအား တပျမတျောမှစောငျ့ရှောကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ အတှငျး မူးယဈဆေးဝါး ဖမျးဆီးရရှိမှု အခွအေနမြေား၊ ဓာတုလကျနကျ တားဆီးပိတျပငျရေး စာခြုပျ(CWC)အား မွနျမာနိုငျငံက ၂၀၁၅ ခုနှဈတှငျ ပါဝငျလကျမှတျရေးထိုးခဲ့ပွီး သဘောတူညီခကျြမြား အတိုငျး လိုကျနာ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေားကို အပွနျအလှနျဆှေးနှေးကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီး ခြုပျ(ကွညျး)နှငျ့အတူ စဈဥပဒခြေုပျ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး အောငျလငျးဒှေးနှငျ့ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Col. Craig Tippins နှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့ တကျရောကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။